Politika: Antoko KINTANA sy ny CRN manoloana ny toe-draharaham-pirenena
jeudi, 07 novembre 2019 14:02
Nampiantso ny mpanao gazety ny avy ao amin’ny antoko KINTANA sy ny CRN manoloana an’ireo toe-draharaha misy eto amin’ny firenena ankehitriny.
Araka ny fampanantenana izay nataon’ny teo anivon’ny fitondram-panjakana dia tokony natao tamin’ny faha 13 oktobra lasa teo ny fametrahana ny Stèle rue Zafy Albert, tsy tanteraka anefa izany akehitriny hoy Pasteur EDOUARD.
Araka ny fanazavan’ity farany, dia efa nisy ny fangatahana alalana izay efa neken’ny teo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika Malagasy amin’ny fananganana sy fitokanana io Stèle io.
Rehefa vita anefa ny fitokanana io lalana io dia notsipahana indray izany, ka mila manao fangatahana vaovao indray izy ireo.
Milaza izy ireo fa miakina amin’ny mpitondra fanjakana foibe no tsy nahatanteraka ity fananganana ity Stèle ity, ary adidiny sy andraikiny ny maneho fialantsiny amin’ny vahoaka malagasy.
Manaraka izany, nisy ny fametrahana fitoriana teny anivon’ny BIANCO mikasika ny villa Elisabeth, ary mangataka ny tompon’andraikitra mba handray andraikitra amin’izany zavatra rehetra izany ny antoko KINTANA sy ny CRN.
Niresaka ihany koa izy ireo mahakasika ny teny Ambohitrimanjaka, izay namafisin’izy ireo fa tsy atakalo foto-drafitr’asa ny tantaran’ity firenena ity.
Ary mbola noresahina ihany koa ny resaka fampianarana izay nampisavorovoro ny olona tato ho ato, dia ny fivoahan’ny laza adina bakalorea, eo ihany koa ny fisian’ny BAC Katolika, ary ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana.
Ho fehiny, mitaky ny fanarenana aingana ity firenena ity ny antoko KINTANA sy ny CRN, ary nametraka hafatra hoan’ny fitondram-panjakana izy ireo fa rehefa tsy vita dia mametraha fialana.